Famerenana: The Penelope Fitzgerald Library - Ikkaro
firosoana >> boky >> Fivarotamboky an'i Penelope Fizgerald
The Bookstore dia tantara lehibe Penelope Fitzgerald. Ity fanontana Impedimenta ity (toy ny mahazatra) dia manana fandikan'i Ana Bustelo sy Postface avy amin'i Terence Dooley. Avelako ianao a rohy hanovana.
Ao amin'ny fivarotam-boky, Penelope Fitzgerald dia mitantara ny tantaran'i Florence Green, mpitondratena iray izay te hanangana fivarotam-boky ao amin'ny tanàna kely iray, Hardborough, izay nonenany nandritra ny 8 taona. Napetraka tamin'ny 1959 izy io, araka ny efa nolazainay tao amin'ny tanàna kely fanjonoana any Angletera.
Azo lazaina fa i Florence Green, toa an'Atoa Keble, dia nitokana irery, saingy tsy nahatonga azy ireo ho olona miavaka tany Hardborough, izay misy ny mponina ao aminy koa. Ireo mpandinika voajanahary ao an-toerana, ny mpikapa volotara, ny paositra, Andriamatoa Raven, ilay honahona, dia nandeha bisikileta irery, niankina tamin'ny rivotra, nojeren'ny mpanara-baovao, izay afaka nilaza ny ora nanaovan'izy ireo ny faravodilanitra.
Izy io dia tantara mitantara ny tantaram-piainana mitantara ny fiainan'ny mpanoratra.
Tena tsara ilay boky. Tsara soratra. Izaho dia nitady mpamaritra anarana hamaritana azy nandritra ny andro vitsivitsy ary ny fikafika na kanto no mety indrindra. Tantara tsy misy fiakarana sy fidinana io. Tsy misy seho hetsika lehibe, ary tsy taitra na mahatsikaritra ny fihetseham-pon'ny olona sy ny tantara toa anao koa ianao Chekhov. Na izany aza, ny tantara manodidina anao, manome elatra anao ary mahatonga anao tsy afaka mitsahatra mamaky. Mahafaly ny mandany ny andalana.
Ny teti-dratsy dia manodidina ny fisokafan'ny fivarotam-boky ataon'ny mpifanila vodirindrina aminy, Florence Green, sy ny fihetsiky ny mponina, ny fifandraisany amin'izy ireo ary ny olana mitranga amin'ny asa andavan'andro.
Sarin'ny fomba fiainana ao amin'ny tanàna kely fanjonoana any Angletera io afovoan'ny taonjato faha-XNUMX io. Ny fahasamihafana eo amin'ny kilasy sosialy sy ny fifandraisana misy eo amin'ny kilasy manankarena sy matanjaka amin'ny fivarotam-boky dia hita mazava.
Ny boky tsara dia sombin-tsarin'ny fanahin'ny mpampianatra, namboarina ho faty ary namboarina ho an'ny fiainana ankoatry ny fiainana.
Io, araka ny fanamarihan'izy ireo, ny malemy indrindra amin'ireo tantara 8 nosoratan'i Fitzgerald no nanoratra. Ka handeha hitady ny ambiny aho.
Misy karazana famakiana roa izay tian'ny mpankafy boky hatrany. Ireo boky miresaka boky sy boky momba ny fivarotam-boky. Iray amin'izany. Raha liana ianao dia manoro hevitra anao aho tsy amin'ahiahy 84, Charing Cross Road
Ireo boky vaovao dia tonga amina fonosana valo ambin'ny folo, nofonosina taratasy volontsôlà manify. Rehefa namoaka azy ireo avy tao anaty boaty izy ireo dia nanangana hierarchy sosialy azy ireo manokana.
Amin'ny toerana maro dia hitako fa miresaka momba ny Polemikan'i Nabokov amin'i Lolita sy ny revolisiona novokariny tao an-tanàna izy ireo. Saingy tsy voamariky ahy io revolisiona io. Ny fijerin'i Lolita dia tsy nahagaga ahy ho toy ny teboka niova ao amin'ilay tantara.
Sarin'i Isabel Coixet
Hitako tamin'ny fanomanana ity famerenana ity fa i Isabel Coixet dia nitarika horonantsary iray momba ilay tantara ary notendrena ho an'ny Goyas 12 izy. Miaraka amin'i Emily Mortimer tahaka an'i Florence Green.
Rehefa avy nitady ilay sarimihetsika ianao, tao amin'ny Netflix, HBO ary Amazon Prime, tsy misy amin'ireo sehatra ireo manolotra ilay sarimihetsika. Any amin'ny farany Hitako tao amin'ny tranombokin'ny tanànako izany. Tadidio fa manana an'ity loharano ity koa ianao raha te hahita loharano audiovisual.
Tiako ilay sarimihetsika. Fampifanarahana tsara sy mahatoky. Miaraka amin'ny taratasy Emily Mortimer. Ny ampahany amin'ny tranomboky rehetra izay angoniny ao amin'ny tranomboky dia mandingana izany, saingy efa nolazaiko fa tsy nahazo alalana maro i Coixet.
Mazava ho azy, ny sarimihetsika dia tsy mahavita mampita ny fahasamihafan'ny kilasy amin'ny fotoana, ny fifandraisan'izy ireo ary ny tolona eo amin'izy ireo araka ny hita ao amin'ny boky.
Avelako ho anao ilay tranofiara izay TSY AZO atoro anao raha tsy namaky ilay tantara ianao ary amin'ny alalàn'ny fahitana ny lisansa sasany. Izany dia fampifanarahana mba hahafahanao mahazo ireo lisansa tianao.
Ary ianao? Efa namaky sy / na nijery ilay sarimihetsika ve ianao? Inona ny hevitrao?
Faly be aho tamin'ilay tantara ary nanomboka namaky Ny voninkazo manga, mpandresy ny Loka nasionalin'ny mpitsikera boky nasionaly mitantara ny fiainan'i Novalis, fa tsy nahatratra ahy :-(